FORCE2019: abmepụta echiche nke ọhụụ maka ịkwadebe idozi - AfricaArXiv
bipụtara Jo Havemann on 18th December 2019 18th December 2019
Edebere blọọgụ a si ASAPbio na reused n'okpuru Ikike CC-BY 4.0. Biko tinye ihe na nkọwa ọ bụla na nkọwapụta mbụ na asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner.
Followinggbaso mkparita uka banyere “willnye ga-emetụta ihe ịga nke ọma nke preprints na bayoloji na njedebe dị a ?aa?” Na IHECE2019 (chịkọtara Ebe a), anyị gara n'ihu na mkparịta ụka anyị na nri ndị ọrụ ogwugwu na ndị ọzọ metụtara obodo:
Na tebụl 1:
Emmy Tsang (onye nhazi), eLife
Theo oge ntoju, BMJ na medRxiv
Andrea Chiarelli, Consultme nyocha
Fiona Murphy, onye ndụmọdụ nnwere onwe
Na tebụl 2:
Naomi Penfold (onye nhazi), ASAPbio
Juan Pablo Alperin, Ihe omuma nke ScholCommLab / Publick
Jo Havemann, onye AfricaArXiv
Lucia Loffreda, Researchme nyocha
Iji dozie ụfọdụ okwu aghụghọ dị ka otu nwere echiche dịgasị iche iche, anyị tụlere nkwupụta mmadụ ise gbasara etu ịkwadebe nri nwere ike isi rụọ ọrụ ma ọ bụ ghara ịrụ ọrụ. Tebụl Emmy tụlere:
Ekwesịrị ịkọwa ọkwa nke akwụkwọ nchịkọta na / ma ọ bụ nyocha ndị ọgbọ na ihe mbido ewepụtala n'ụzọ doro anya na isi mmalite ahụ.
Ọ ga-enwererịrị onwe ya mgbe niile maka onye edemede biputere akwụkwọ mmado
Ekwesighi iji izipu imezi ihe nchọpụta
Ihe ndozi ndozi kwesiri ibu nnabata ma obu ruwe uda elu
Ka ọ dị ugbu a okpokoro Naomi (eserese dị n’elu) tụlere “ndị na-ahụ maka nyocha na ndị na-akwado nyocha ekwesịghị ịkwado sava ihe ubi ma ọ bụrụ na ha gosipụta ọchịchị obodo”, tupu ha atụgharị ọhụụ dị iche iche maka ihe nkwadebe nwere ike ịbụ.
Nkwupụta Straw-man 1: Ọkwa akwụkwọ nyocha akwụkwọ na nyocha ma ọ bụ nyocha ndị ọgbọ nke ihe mbido a gafere ga-ekwusara ya ngwa ngwa ịnweta akwụkwọ mbido ahụ.
Agbanyeghị na anyị kwenyere na nyocha akwụkwọ na nyocha ọ bụla emee na mbido, ka anyị ga-agwa ya nke ọma, anyị chọpụtara ozugbo na anyị nwere ọhụụ dị iche iche maka nghọta pụtara na onodu a. Ọ dị mkpa ka anyị chebara mkpa na ndị na-agụ akwụkwọ echiche: onye nyocha nke na-enyocha ihe niile na-eme nchọpụta nwere ike ọ dị mkpa ịmara ọkwa nyocha ọhụụ site na (ọ nweghị?? Nyocha nyocha maka irube isi na iwu na iwu nke sayensị na sayensị. ), ebe onye ọrụ nyocha nke na - agbadata omimi banyere isiokwu ahụ ma ọ bụ usoro ahụ nwere ike ịchọpụta nkwupụta nyocha nke ndị ọgbọ na akụkọ akụkọ mbipụta ahụ bara uru. Ekwesịrị ịgwa ndị niile na - agụ ya ihe ụfọdụ, dị ka ịkọ nkọ. Maka nhazi zuru oke, ọ ga-adịkwa mkpa na ịnwe ozi ọma na akwụkwọ ndenye ego na nyocha nke ọma site na iji usoro metadata akọwapụtara nke ọma yana ekwenye. Mana olee otu a ga - esi weghara data dị otú a n'ofe nkesa sava? Nyochaa ndị ọgbọ na akwụkwọ ndezigharị n'oge a dị iche iche n'etiti akwụkwọ ọgụgụ na sava, yabụ kedu etu anyị ga-esi hazie usoro ndị a nke ọma?
Nkwupụta Straw-man 2: Ọ ga-enwere onwe ya mgbe niile maka onye edemede biputere akwụkwọ mmado.
Anyị niile jikọrọ ọnụ kwenye na ịkwadebe ihe ọ bụla ga - adịrị n'efu n'oge eji ya.
Nkwupụta Straw-man 3: Ekwesighi iji ọgwụ iji mee ka nchọpụta kachasị mkpa.
Dika odi nma, ihe mbu choputara abughi ihe di nkpa, kama anyi matara na, na onodu ubochi nyocha ugbu a, o gha gha edozi nsogbu a. Ozugbo edepụtara akwụkwọ mgbasa ozi na ngalaba ọha, mkpa ọrụ sayensị akọwapụtara na mbido akwụkwọ ahụ. Anyị ghọtara na ngwa iwu dị ugbu a nwere ike ọ gaghị eme ihe kwekọrọ na nke a: dịka ọmụmaatụ, iwu patent US ka na-egosipụta ebumnuche dabere na ide akwụkwọ ngwa patent, yana ngosipụta ọha na eze - site na mbido akwụkwọ ma ọ bụ nzukọ na - ezighi ezi - nwere ike mebie nke a. Itinyekwu uche na idoanya dị mkpa maka otu ikenye akwụkwọ ozi ga - ejikọ ndị nwere ebumnuche na ihe nke a pụtara maka ịchọta na akụ ọgụgụ isi.
Nkwupụta Straw-man 4: sava ngwa agha ga-abụ ihe ọgbụgba ka ọ dị elu na ngwaọrụ ndị dị na mbara ala na mgbada.
Iji ihe eji eme ihe n’ihu iji nweta ikike ha, anyị chere na sava Premiya kwesịrị ịbụ dakọtara ma soro ya rụọ ọrụ na mgbakwunye mgbada na mgbada, ngwanrọ na ndị mmekọ, n’otu oge anaghị achọ ịma gbasara ozi ma ọ bụ ihe na-egosipụta omume, nzụlite obodo na ihe ndị ọzọ. Iji maa atụ, usoro dị elu iji were ma dozie metadata nwere ike ịba uru maka nchọpụta. Ndị sava njikwa obodo nwekwara ike inye ndụmọdụ maka omume kacha mma maka sọsọ ọrụ na-agbadata, na-agbakwunye uru ọrụ ahụ na ịkwado ijigharị na onyinye ndị ọzọ.
Nkwupụta Straw-man 5: Ndị na-ahụ maka nyocha na ndị na-akwado nyocha na ndị na-eme nchọpụta ekwesịghị ịkwado sava maka ngwa ahia ọ gwụla ma ha gosipụtara ọchịchị obodo.
Kedu ihe anyị pụtara site na nchịkwa obodo na gịnị kpatara nke a ji dị mkpa?
Anyị tụlere na isi ihe mere eji akwado ihe ndị obodo na - ebute bụ iji belata ohere a ga - ebu ụzọ elebanye anya n'ọfụma maka sayensị, dịka o meworo na mfu nke inwe ya na ohere ịnweta akwụkwọ ọgụgụ ndị enyochala (site na mkpokọta). uru dị mkpa ndị nkwusa azụmahịa. N'ebe a, anyị nwere ike ịna-ajụ: achọrọ azụmahịa maka ọrụ ebumnuche maka ịkọkọrịta ihe ọmụma na ikwado okwu, oleekwa otu anyị ga - esi hụ na nke a abụghị ikpe maka sava ndị na - ebu akwụkwọ?
Karịrị ndị ọkwọ ụgbọala azụmahịa, anyị kwetara na ndị na-eweta ọrụ / akụrụngwa (ndị na-ebi akwụkwọ, ndị na-ahụ maka teknụzụ) na-eme usoro na nhọrọ nke na-emetụta omume onye ọrụ. Azụliteghị nke a dị ka nkatọ - kama, ọtụtụ n'ime anyị kwenyere na omume nke ndị nyocha onwe ha na-abụkarị ihe na-eduzikarị mkpa ha n'otu n'otu ma ọ bụghị uru mkpokọta, n'ihi akụkụ nke nrụgide na nsogbu nke gburugburu ebe ha na-arụ ọrụ n'ime. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na-ewetara akụrụngwa na ihe ọmụma banyere ịkọ akụkọ sayensị nke jikọtara ndị na - agụ akwụkwọ, ndị na - enyocha ya na ndị edemede. Ajụjụ a bụ etu a ga - esi hụ na usoro na nhọrọ ndịiche dị n'ụkpụrụ ga - adaba n'ihe ga - adịrị mfe ọgụgụ akwụkwọ.
Anyị kwurịtara otu enweghị otu onye ọ bụla na-achọ ọdịmma nwere ike ịnọchite anya ọdịmma kachasị mma nke sayensị, ọ nweghịkwa otu ọhụụ banyere otu kachasị mma iji nweta ya. Advanga n’iru uto nke ihe saiti otu ihe gha buru ndi obodo niile? Ka ekwesịrị ime mkpebi niile maka ọdịmma ndị otu? Kedu ọdịnaya anyị kwesịrị ị toa ntị na ya, oleekwa otú anyị si mara onye anyị ga-atụkwasị obi? Kedụ ka esi mee otu mkpebi otu ọgbakọ ga - aza ajụjụ maka mmadụ niile? Anyị jụrụ ajụjụ ndị a na nghọta nghọta na ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ na-arụ ọrụ dịka mmekorita n'etiti ndị otu agụmakwụkwọ na ndị ọrụ mbipụta, yana ụfọdụ sava akara (dịka bioRxiv) na-arụ ọrụ n'otu ahịrị ahụ. Agbanyeghị, ma otu a ka ọrụ a agaghị esi gosipụta, na enweghị nghọta nwere ike ịbụ isi okwu mgbe a bịara n'ịtụkwasị obi na mkpebi niile bụ maka ọdịmma kacha mma. Thehapụ mkpebi nke onye ị ga-atụkwasị obi maka ndị na-akpa ego ma ọ bụ ndị na-atụ vootu nwere ike ọ gaghị egosipụta ihe obodo sara mbara chọrọ.
Yabụ, olee otu a ga-esi eme mkpebi na sava ịkwado n'ụzọ dị obosara obodo nwere ike ịtụkwasị obi? Anyị lere anya n'ihe atụ ndị ọzọ nke ọchịchị na - edu ndị obodo - ma ọ bụ obodo ahụ nwere ntinye na mkpebi ma ọ bụ nwee ike ijide ndị na - eme mkpebi maka ha, karịsịa ịmegharị mkpebi ọ bụla metụtara ọdịmma azụmahịa. Otu usoro iji mee ka a zaa ajụjụ maka (RFC; dịka ọmụmaatụ, lee.) https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment) ka onye obula we nye uzo. Agbanyeghị, ekwesịrị inwe usoro doro anya iji chọpụta onye etinye ya n'ọrụ, yana nnabata na usoro ndị dị otu a anaghị ekwe nkwa arụpụta dị mma. N’aka ozo, oru ngo nwere ike iji otutu ihe ha n’eji eme ihe iji gee ndi ozo di na ntinye aka: dika imaatu, ndi otu n’azu Europe PMC na-ege ndi oru ntughari site na nyocha ihe omumu, ndi ulo akwukwo site na ulo akwukwo ndumodu sayensi, na ndi n’oru ntuli aka site na mmekorita ndi n’enye ego. Usoro ikpe azụ a nwere ike iwepụta usoro nnabata, ọ bụghị naanị otu onye na - ahụ maka ya (dịka onye ọ bụla na - anọchite anya akara azụmaahịa), mana ọ nwere ike ịkwụ nnukwu ụgwọ n'ihe banyere njikwa ego.
Mkpebi onye ọrụ na-emetụta mmekọrịta na teknụzụ nke teknụzụ mere na ọkwa akụrụngwa, yabụ otu esi eme nkesa sava, onye ga - enye aka na ọhụụ ya maka ịkwadebe ihe omumu banyere ihe omimi ga - emesịa pụta na eziokwu. Na mkparịta ụka gara n'ihu na ntanetị mgbe anyi risiri nri.
Anyị nwere ike ịhazi ọhụụ na-emekọ ihe maka ịkwadebe ihe omimi banyere ihe ndị dị ndụ.
Ahụmahụ anyị, ngalaba nke ihe omuma na ụkpụrụ niile na-emetụta ihe anyị niile na-elebanye anya na anyị ga-adị ka ha wee bụrụ: site n'inyere nsonaazụ ga-ekerịta n'oge oge, na-akpaghasị ụlọ ọrụ azụmahịa ugbu a.
Tebụl Emmy tụlere etu ọgba aghara na gburugburu ihe mejupụtara ihe ịtụrụ ala (na ihe anaghị) ewepụta ihe isi ike mgbe ha na-etolite ngwaọrụ, atumatu na akụrụngwa maka ha. Site na iji okwu dị iche iche eji eme nkwadebe, na ebe obodo nwere ike ịchọrọ ịkọwapụta nyocha dị iche iche tupu oge mbipụta, a tụpụtara na ịkọwa nkọwa nke mbido gaa na akwụkwọ "dị njikere maka mbipụta akwụkwọ akụkọ" nwere ike inye aka belata mmepe teknụzụ, nkwukọrịta na ọrụ nkwado. Ndị na-akwadebe ụlọ ndozi ga-enwe ebumnuche ebumnuche ụlọ na inye ha ozi ndozi. Nke a nwere ike ọ gaghị ejide usoro ojiji niile, mana a hụrụ ya dị ka azụmaahịa dị mma maka ịba ụba nkuchi ugbu a n'oge a. Agbanyeghị, na tebụl Naomi, anyị tụpụtara ọ nwere ike ịbụ ihe bara uru ịkọwapụta banyere mgbagwoju anya na / ma ọ bụ ọhụụ agbatị maka mgbanwe, iji zere inwe ọganihu ịkwụsị ozugbo otu nkọwa a dị mfe kwụsịrị.
Dị mkpa, anyị kwurịtara nchegbu anyị banyere akwadebe, mgbe ụfọdụ ịtụgharị uche n'ọnọdụ ndị anyị achọghị ịhụ ka ọ ga - eme ka ọ dị mma:
Nkwado ime nwere ike ọ gaghị abụ oge ọ bụla izipu ma gụọ, dabere n'ụdị ego ejiri iji kwado ụgwọ nke akụrụngwa mbido - enwere okwu ịdọ aka ná ntị banyere otu mmeghari nnabata na US na Europe si na-achụ ugbu a iji isiokwu. ndị na - ahazi nhazi (APCs) iji kwụọ ụgwọ maka nnabata ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ otu esi akwụ ụgwọ ego maka ọ gwụla ma nhọrọ ndị ọzọ, dịka nkwado nke ndị na-enye ego na ụlọ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, site na ọba akwụkwọ).
N'inwe nkwupute dị n'ihu ọha, ọ bụrụ na a ghọtahiere ya ma ọ bụ ghọtahie ya? Ọ bụrụ na sayensị agbasaghị dịka “akụkọ ụgha”? Anyị kwurịtara otú ụfọdụ ndị ọrịa si nwee ike ịkatọ akwụkwọ ahụ na-enweghị agụmakwụkwọ sayensị nkịtị yana nyocha nke ndị ọgbọ anaghị ekwe nkwa idozi. Offme ka ndị na - agụ ya nwee nghọta na ozi banyere ma ndị ọkachamara ndị ọzọ nyochagharịwo ọrụ ahụ na ọ ga - enye aka.
Imeghari ulo akwukwo nwere ike ọghara imebi ohere agụmakwụkwọ - anyị nwere ike ịga n’ihu n’ịwa ụwa ebe a na-anaghị ebuli ngwa ngwa, imeghe na ị nweta ihe ọmụma na iri ihe. Enwere ike ịhụ nke a taa site n'iji idozi akwụkwọ iji kwupụta mkpa kachasị n'ịchọta na-enweghị ohere ịbanye na data dị n'okpuru, yana site na mbido akwụkwọ mbipụta mbipụta akwụkwọ ebe ndị na-ede akwụkwọ nwere ike igosi na ha agafeela usoro ihe omume dị na ụdị akwụkwọ akụkọ. .
Nyiwe ndi n’ere akwukwo nwere ike imeputa ihe eji abanye ya, dika ndi n’edetu ndi biputere ya n’ego ha, emezie ha ka ha nogide n’onodu nyocha nke ndi n’eto.
Anyị kwurịtara nkenke banyere ojiji iji ihe ndị mepere emepe na-akpata uru: ọ ga-eme ka idozi ego iji nweta nrigbu azụmaahịa site na iji usoro ikikere, dị ka òkè (-SA)? Ma eleghị anya ọ bụghị: uru uru na ihe ndị mepere emepe nwere ike ọ gaghị abụ nsogbu, ọ bụrụhaala na obodo kwenyere na uru nke imeghe ga-akarị nrigbu ọ bụla, dịka nke a na-ahụ ugbu a na ikpe maka Wikipedia.
Yabụ kedu ihe anyị chọrọ ka ọ mee? Anyị mechiri site na ịkesa ọhụụ nke anyị maka nkwadebe, gụnyere:
Nnukwu ebe a ga-ekesa maka nyocha, n'oge a na-akwụghị ụgwọ, nke nweere ndị edemede na ndị na-agụ akwụkwọ, na nke nyocha ndị ọgbọ na-aga n'ihu. Ntụle a nwere ike ịhazi ọgbakọ; enwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na oge mgbe achọrọ nke a, dịka ọmụmaatụ n'oge ntiwapụ ọrịa na-efe efe. Nyocha na nkwado nke mbadamba akwụkwọ nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga, na ịhazi ihe na-eme ka a gbaa ajụjụ akụkọ zuru ezu ajụjụ ọnụ.
Ihe ndekọ doro anya nke okwu sayensị nke bụ ihe mmụta maka mmụta a nabatara na / ma ọ bụ omume ndị ka mma, n'ime ọzụzụ (dịka ọmụmaatụ, usoro ndekọ ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị iji tinye na ntọala nnwale) ma ọ bụ karịa (dịka ọmụmaatụ, iji bụrụ ihe na-ewuli elu. onye na - enyocha ya na onye edemede na - ahụ maka ọrụ).
Ingkwado n’ọrịa ọsịsọ na ọgwụ ọfụma, ọkachasị n’ụwa ebe ndị ọrịa etolitela ndụ ha site na hacking teknụzụ ọgwụ (dịka #WeAreNotWaiting) ma ọ bụ igosipụta ihe ndị na-ahụ maka ọgwụ (s) ha n'akwụkwọ.
Vehiclegbọ nke ndị nyocha nwere ike jikọọ ma soro ndị na - ege ntị ndị ọzọ (ndị ọrịa, ndị na - atụ iwu), ma mụta otu esi eme nke a.
Forzọ maka ọgbọ ihe omuma na iji bụrụ nke kwesiri nhatanha na ịdabere na ya, dịka ọmụmaatụ site na ịbawanye ọhụhụ nke ndị nyocha gburugburu ụwa (dịka AfricaArXiv na ndị ọzọ na-eme maka ndị nyocha na Africa ma ọ bụ site na Africa).
Vehiclegbọ ala maka okwu agụmakwụkwọ nke anaghị adị mkpa ịbanye na nnọkọ mmadụ, na -ebelata iji njem ụgbọ elu ma zere mwepu n'ihi ụgwọ, ihe ndị metụtara visa na ihe ndị ọzọ.
Ịga n'ihu, aro ga-etinye olu dị iche iche na mkparịta ụka ahụ, nye echiche maka inwe echiche ka ukwuu, mepụta ọhụụ nkwekọrịta maka ọdịnihu nke ịkwadebe, zụlite ụkpụrụ omume kachasị mma maka sava mbido, ma nye ndị ọrụ ihe ọmụma zuru oke na doo anya iji nyere ha aka ịhọrọ (site na omume) ọdịnihu ha chọrọ ịhụ.
Kedu ọdịnihu ị ga - achọ ịhụ? Anyị na-akpọ gị òkù ka gị na ndị ọrụ ibe gị kwuo banyere nke a ma hapụ nkọwa gị ụdị nke izizi a.
Categories:	Open AccessMbidoPublishing
ScienceOpen na AfricanArXiv na-agbakọ aka ọnụ iji nye ndị na-eme nchọpụta Afrika ohere nwere ọhụụ dị omimi, ịkparịta ụka na mmekọrịta. Usoro nyocha na ibipụta ScienceOpen na-enye ọrụ yana atụmatụ dị mkpa maka ndị na-ebi akwụkwọ, ụlọ ọrụ na ndị nyocha, gụnyere ọdịnaya GỤKWUO…